ikhaya / Igqwetha lezindlu zeJersey City
Igqwetha laseNew Jersey lokuthengisa izindlu
Iqela lethu lizinikele ekwenzeni zonke izinto zakho zentengiselwano ngearhente ngaphandle komthungo kunye noxinzelelo ngaphandle. Ukuthenga ikhaya yeyona nto itsala imali eninzi umntu ayenzayo ebomini babo. Ukuba ne-NJ Igqwetha lezindlu inokwenza inkqubo ingabi noxinzelelo. Singa qinisekisa ukuba awulibali kwanto kwaye awuthathiwa nabani na ojongana naye. Phambi kokuba ukhethe igqwetha lezindlu kunye neNew Jersey, sicebisa ukuba ucele ukubona isampula ye-HUD-1 evela kwigqwetha ukuze uqinisekise ukuba awukhonjiswa imali efihliweyo ngumthetho wezomthetho.
Ukuthengisa izinto zasekhaya ngaphandle kweNew Jersey kunye neNew York
UkuThenga iiKhaya kuthengiswa eNew York naseNew York
Ivale icala lomthengi
Ukuvalwa kwicala lomthengisi
ENew Jersey naseNew York akunyanzelekanga ukuba ube negqwetha xa uthenga okanye uthengisa izindlu nomhlaba, kodwa zihlala zilicebo elilungileyo. Jonga eli nqaku leNew York Times ngezizathu. Inqaku leNew York Times: Ityala lokuqesha igqwetha. Sineeofisi ngokuphuma ngaphandle kweJersey, kwaye abameli bethu beNdawo yokuhlala babambe iindibano kuyo yonke idolophu eNew Jersey. Ngamaxesha amaninzi, njengabathengisi akufuneki ubekho xa kuvalwa kwaye unokuvala ngeposi. Ngaba bathengi abaqhele ukuya kwisivumelwano sokutyikitya kuwo onke amaxwebhu obambiso lwezindlu kunye nokunye.
Nxibelelana nathi ku- (973) 200-1111 okanye usithumelele i-imeyile [Imeyile ikhuselwe]
Pingback: Ndidinga ukuQesha igqwetha lokuvalwa kwam kwezindlu nomhlaba kwi-NJ? - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga